यी हुन् कांग्रेसले जित्ने निर्वाचन क्षेत्र :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
यी हुन् कांग्रेसले जित्ने निर्वाचन क्षेत्र
देउवा, पौडेल, निधि, गच्छदार, कार्कीलगायत सुरक्षित
काठमाडौं । मुलुक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रप्रति मुलुक विशेष रूपमा केन्द्रित छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बोकेका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कति सुरक्षित छन् ? भन्ने सर्वत्र चासो देखिएको छ । त्यसमा पनि मुलुकको मुख्य ध्यान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार भएको डडेलधुरा, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली उम्मेदवार रहेको झापा ५, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उम्मेदवार रहेको चितवन ३ विशेष चर्चामा छन् ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उम्मेदवार रहेको काठमाडौं २, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार रहेको तनहुँ १, पूर्वकार्यबाहक सभापतिद्वय गोपालमान श्रेष्ठ उम्मेदवार भएको स्याङ्जा–२, विमलेन्द्र निधि उम्मेदवार भएको धनुषा–३, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव लडेका गोरखा १ र काठमाडौं–१ पनि विशेष चर्चामा छन् ।
शीर्ष नेताहरूमध्ये माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अरु करिब करिब सुरक्षित छन् । प्रचण्डले भने कांग्रेसको समर्थनमा खडा भएका राप्रपा उम्मेदवार विक्रम पाण्डेसँग कडा सामना गर्नुपरिरहेको छ । गत संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाका पाण्डेले चुनाव जितेको क्षेत्र हो त्यो । गत संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको भोट जोड्दा १२ हजार पाँच सय थियो भने कांग्रेस र राप्रपाको भोट जोड्दा १६ हजार तीन सय थियो । गत स्थानीय चुनावमा भने कांग्रेस र माओवादी एकातिर र एमाले र राप्रपा अर्कोतिर भएर चुनाव लडेका कारण निश्चित आंकडा आउन सकेको छैन । माओवादीले धोका दिएका कारण कांग्रेसका भोट कत्ति पनि नपोखिई राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई जाने अवस्था छ भने माओवादीबाट पीडित बनेका एमाले कार्यकर्ताहरूको धेरै भोट प्रचण्डलाई जाने अवस्था छैन । भोटको हिसाबमा तत्कालका लागि प्रचण्डभन्दा पाण्डे बलिया देखिएका छन् । तर माओवादीको मुलुकभरिको ताकत आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा जिताउन लागिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध कम्युनिस्ट गठबन्धनले माओवादीका खगराज भट्टलाई अघि सारेको छ । गत चुनावमा देउवाले १६ हजार, एमाले आठ हजार र माओवादीले चार हजार मत प्राप्त गरेका थिए । यसपटक माओवादी र एमालेबीच तालमेल भएका कारण मतअन्तर कम हुने विश्वास कम्युनिस्ट गठबन्धनले गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम कम्युनिस्टहरूका पक्षमा देखिएका कारण देउवा सुरक्षित नरहेको विश्लेषण राजधानीका मिडियामा आउने गरेको छ । तर राजधानीमा बसेर गरिने भविष्यवाणीभन्दा जिल्लाको वास्तविकता फरक छ । देउवाका लागि व्यक्तिगत रूपमा भोट हाल्नेको जमात निकै ठूलो हुने गरेको छ । यसपटक गत निर्वाचनको भन्दा पनि फराकिलो अन्तरमा अर्थात् १५ हजारको अन्तरमा देउवाले चुनाव जित्ने अवस्था छ ।
कैलालीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा तीनवटा जित्ने बुझिन्छ । डा.आरजु देउवाले कैलाली ५ बाट निर्वाचन जित्ने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेस (बीपी) ले क्षितिज भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएका कारण डा.आरजुलाई अप्ठेरो पर्ने विश्लेषण राजधानीमा गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । एमालेका युवा नेता एवं कैलाली २ का निर्वतमा सांसद मोहनसिंह राठोर कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकसँगको एकीकरणपछि पूर्वसांसदद्वय रामजनम चौधरी र जनकलाल चौधरी पनि कांग्रेस जिताउने अभियानमै छन् । कैलालीका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनमा नेपाली कांग्रेसको जित सुनिश्चित बनिसकेकोे छ । क्षेत्र नम्बर १ मा केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
झापा ५ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रा.खगेन्द्र अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा ओली निकै अगाडि छन् । तर एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि केलाउने संयन्त्र बनेको छैन । माधव नेपाल उम्मेदवार रहेको काठमाडौं–२ मा ओली पक्षले बागी उम्मेदवारी हालेका कारण ओलीलाई पनि सजिलो नपार्ने अभियानमा नेपाल पक्षका कार्यकर्ता छन् । तर उनलाई हराउन सम्भव छैन । झापा १ मा विश्वप्रकाश शर्माले कम्तीमा तीन हजार मतको अन्तरमा चुनाव जित्दै छन् । स्थानीय निर्वाचनको मत विश्लेषण गर्दा केही हजारले पछि देखिएको कांग्रेसले थप मतदाता संकलनमा देखाएको सुझबुझले परिस्थिति उल्टिएको छ । झापा ३ मा कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्थिति पनि मजबुत बन्दै गएको छ । उनको व्यक्तित्वले एमाले माओवादी कार्यकर्तालाई पनि अकर्षित गरेको छ । उनीहरू गाईलाई मत हाल्न तयार नभएकाले सिटौला जितको नजिक पुगेका छन् ।
पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी बागी उम्मेदवार बनेका कारण वरिष्ठ नेता पौडेल उम्मेदवार बनेको तनहुँ–१ सर्वाधिक चर्चामा थियो । जोशीको उम्मेदवारी खारेजीपछि उनलाई निकै सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस पाँच हजार मतले अघि रहेको गत संविधानसभा तथा स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ ।
जोशीले शिक्षकमा जागिर लगाइदिएका ११ सय युवा छन् त्यो क्षेत्रमा । गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी र गुप्तचरमा जागिर लगाइदिएका नौ सय युवा छन् । सिटिइभीटी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायतका निकायमा जोशीले जागिर लगाइदिएका युवाहरूको संख्या पनि करिब एक हजार छ । यसैगरी, जोशीका नातागोता तथा बन्धुहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । क्षेत्रीय सभापति एवं भानु नगरपालिकाका मेयर उदय गौली, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख पुष्प श्रेष्ठ, डुम्रेकी महिला नेतृ चिनु पोखरेललगायतको ठूलो जमात जोशीको पक्षमा देखिएका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि पौडेलले नै चुनाव जित्ने आंकलन गरिनुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, एमालेका उम्मेदवार किसान श्रेष्ठको जनाधार कमजोर हुनु र पैसा लिएर नवकुवेरलाई टिकट दिएकोमा एमालेभित्रै असन्तुष्टि देखिनु । दोस्रो कारण हो, पौडेललाई अन्तर्घात गरी एमालेमा जान सक्ने भोटहरू जोशीकै निर्देशनमा स्वतन्त्र चुनाव चिन्हमा अडिनु । तर प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका चारवटै क्षेत्रमा एउटै जातका नेतालाई उम्मेदवार बनाएकोमा तनहुँ जिल्लामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ ।
पुराना नेता हरिबोल भट्टराई नेपाली कांग्रेस (बीपी) गठन गरी उम्मेदवार बनेका कारण काठमाडौं–१ पनि विशेष चर्चामा छ । विगतका दुईवटा आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहले धेरै मतअन्तरले चुनाव जितेको क्षेत्र हो यो । यतिबेला सिंह यस क्षेत्रमा तेस्रोपटक उम्मेदवार बनेका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कमजोर देखिनु र हरिबोल भट्टराई जस्ता हस्ती चुनाव लड्नुले प्रकाशमान सिंहको तेस्रोपटकको उम्मेदवारी फलामको च्युरा सावित हुने स्थिति छ । तर उनी पराजित भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन । मतअन्तर भने विगतको भन्दा कम फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्षेत्रमा नेवार समुदायको भोट मात्रै २५ प्रतिशत छ । क्रिस्चियनको डोनेसनमा खडा भएको विवेकशील साझा पार्टीसँग प्रकाशमानको मुुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनले रुकुमतिरका एक सामान्य युवक अनिल शर्मालाई उम्मेदवार बनाइदिएका कारण कांग्रेस विरोधी मतहरू रवीन्द्र मिश्रले पाउने सम्भावना छ । तर हरिबोलले रवीन्द्रका धेरै भोट काट्छन् कि प्रकाशमानका ? भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
धनुषा ३ मा विमलेन्द्र निधिको जित सुनिश्चित जस्तै छ । स्याङ्जा–२ मा पनि गोपालमान श्रेष्ठ सुनिश्चित जस्तै छन् । सुनसरी–४ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धेरै मतअन्तरले चुनाव जित्ने अवस्था बनेको छ । सुनसरी १ मा नेपाली कांग्रेसले संघीय समाजावादी फोरमका अशोक राईलाई साथ दिएको छ भने अन्य तीनवटा क्षेत्रमा संघीय समाजवादीले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएको छ । त्यसैले सुनसरीका तीनवटै क्षेत्र कांग्रेसका लागि सुरक्षित बनेका छन् । उदयपुरमा डा.नारायण खड्का धेरै नै सुरक्षित छन् भने नारायण कार्की पनि चुनाव जित्ने पोजिसनमा छन् । सोलुखुम्बुमा बलबहादुर केसी र संखुवासभामा दीपक खड्का सुरक्षित छन् । ओखलढुंगामा रामहरि खतिवडा पनि चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
बुथ कब्जा रोक्न सके यसपटक दोलखामा पनि कांग्रेसका उम्मेदवार रुद्रबहादुर खड्काले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अवस्था दिनप्रतिदिन सबल हुँदै गएको छ । रामेछापमा पूर्णबहादुर तामाङ (कन्छा लामा) चुनाव जित्ने पोजिसनमा पुगिसकेका छन् ।
राप्रपासँगको तालमेल भरपर्दो हुन सक्यो भने काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये भक्तपुर–१ बाहेक अन्य नेपाली कांग्रेसले आरामसँग चुनाव जित्ने आंकलन गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार बनेका बौद्धिक नेता डा.प्रकाशशरण महत र ४ मा उम्मेदवार बनेका युवा नेता गगन थापाको पक्षमा उत्साहजनक चुनावी लहर आइसकेको छ । यी दुवै नेताले फराकिलै मतअन्तरमा चुनाव जित्ने आंकलन गरिएको छ । नुवाकोटमा डा.रामशरण महत र रसुवामा मोहन आचार्य सुरक्षित छन् ।
प्रदेश ४ नेपाली कांग्रेसको गढ हो भन्ने कुरा गत स्थानीय निर्वाचनले नै पुष्टि गरिसकेको छ । एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुँदा र कांग्रेसमा दरार उत्पन्न हुँदा पनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश ४ अन्तर्गतका ६५ प्रतिशत पालिकामा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो । बाग्लुङको एक निर्वाचन क्षेत्रबाहेक प्रदेश ४ का सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले चुनाव जित्ने परिस्थिति बनाउँदै गएको छ । तनहुँ २ मा युवा नेता शंकर भण्डारीले सजिलै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
Tarun Khabar0response बिहिबार,२३ कार्तिक २०७४ 2680 Views